चिसोमा मौसममा खानुस् तातो कोदोको ढिँडो, स्वास्थ्यमा पुग्छ यस्तो फाइदा ! – Ghar ko Doctor
चिसोमा मौसममा खानुस् तातो कोदोको ढिँडो, स्वास्थ्यमा पुग्छ यस्तो फाइदा !
Home » Health Tips » चिसोमा मौसममा खानुस् तातो कोदोको ढिँडो, स्वास्थ्यमा पुग्छ यस्तो फाइदा !
काठमाडौं । कोदोको रोटी तथा ढिँडो नखाने नेपाली कम नै होलान्।चिसो मौसममा तातो र मिठो परिकार खाने चलन धेरैको हुन्छ ।तातो र मिठो खानाको विषयमा चर्चा हुँदा जाडोयाममा कोदोको ढिँडो पहिलो रोजाइ हुन थालेको छ ।
पहिला पहिला–गाउँघरमा चामल उत्पादन कम हुने भएकाले कोदोको ढिँडो बढी खाने गरिन्थ्यो । त्यसैले पनि चामलको भातलाई कुनै विशेष चाडपर्वमा खानुपर्छ भन्ने मान्यता पनि रहेको थियो ।तर, अहिले समय निकै परिवर्तन भएको छ । गाउ शहरमा चामल भन्दा ढिँडो लोकप्रिय बन्न थालेको छ ।
परिवारका सबै सदस्य भेट हुँदा घरमा मिठो परिकार बनाउने भनेर चिसोमा ढिडो खाने चलन समेत आएको छ ।शहरी क्षेत्रका ठूला ठूला होटलमा विशेष परिकारको रुपमा ढिडो पाक्न थालेको छ । चिसो मौसम शुरु भएसँगै मानिसहरु कोदोको ढिडोतर्फ लोभिने गरेका छन् ।चिसो मौसममा रमाइलो मान्दै ढिडो खादा पारिवारिक खुसी मात्र होइन, स्वास्थ्यका लागि पनि निकै लाभदायीक मानिन्छ । कोदोको ढिडो मात्र होइन रोटी र अन्य विभिन्न परिकार समेत बनाएर खाइन्छ । आज हामी कोदोको फाइदाबारे जानकारी दिदैछौं ।
प्रत्येक १०० ग्राम कोदोमा पाइने पौष्टिक तत्व यस्तो छ-प्रोटिनः ७.६ ग्राम ,फ्याटः १.५ ग्राम,कार्बोहाइड्रेटः ८८ ग्राम,क्यालसिएमः ३ सय ७० ग्राम,भिटामिनः ०.४८ मिलिग्राम, थाइमिन बि १ः ०.३३ मिलिग्राम, राइबोफ्ल्याबिन बि२ः ०.११मिलिग्राम, नाइसिन बि३ः १.२ मिलिग्राम, फाइबरः ३ ग्राम। कोदो स्वास्थ्यका लागि अत्यन्त फाइदाजनक हुन्छ । कोदोका परिकार पचाउन सहज हुन्छ । कोटोमा क्याल्सियम,म्याग्नेसियम, फस्फोरस, म्यागनिज, भिटामिन बी, टिप्टोफेन, फाइबर, एन्टिअक्सिडेन्टलगायतका पोषक तत्त्व पाइन्छ।कोदो का परिकार शक्ति र ऊर्जाका लागि राम्रो श्रोत हो ।तौल घटाउन कोदो खानु राम्रो मानिन्छ ।
कोदो खाएको धेरै समयसम्म भोक लाग्दैन । जसले गर्दा तौल नियन्त्रणमा सघाउ पुग्छ ।मुटुका रोगीहरूका लागि कोदोको रोटी खानु धेरै लाभदायक हुन्छ । यसमा प्रशस्त मात्रामा नियासिन हुन्छ, जसले शरीरमा कोलेस्ट्रोलको स्तर घटाएर मुटु रोगको जोखिम पनि कम गर्छ ।यसबाहेक यसमा भएको पोटेसियम र म्याग्नेसियमले रक्तचाप नियन्त्रण राख्न सघाउँछ । कोदामा प्रशस्त मात्रामा भएको क्याल्सियमले हाड बलियो बनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ । कोदोमा हुने आइरनले रक्त अल्पता हुन दिदैन ।यस्तै कब्जियत र ग्यासको समस्या भएकाहरूले नियमित रुपमा कोदोको रोटी वा ढिडो खाने गरे आराम पाइन्छ । मधुमेहको खतराबाट बच्न कोदोको परिकार लाभदायीक छ ।
← आस्था राउत बि’रुद्द अहिलेसम्म मुद्दा दर्ता भएको छैन, नेपाल आए पछी हामी बोलाउछौ :प्रहरी
‘जति थोरै सुतिन्छ, उति छिटो मरिन्छ’ सचेतनाको लागि १ शेयर गरौं →